पाथीभरा मातालाई दर्शन गरेर हेर्नुहोस कस्तो छ त आज २०७६ माघ २० गते सोमबारको राशिफल – Khabar Silo
पाथीभरा मातालाई दर्शन गरेर हेर्नुहोस कस्तो छ त आज २०७६ माघ २० गते सोमबारको राशिफल
Posted on February 3, 2020 February 3, 2020 Author admin Comment(0)
आज २०७६ माघ २० गते सोमबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
सामाजिक कार्यबाट प्रसिद्धि कमाइने छ । शत्रु परास्त हुनेछन् । धन सिञ्चित हुनेछ । बोलीको प्रभाव बढ्ला । जागिरमा पदोन्नतिको हुने सम्भावना छ । पारिवारिक समस्या हट्नेछ ।
मन अस्थिर रहनेछ । पराक्रम घट्नेछ । धार्मिक आस्था घट्नेछ । यात्रामा बाधा । आफन्तबाट साथ सहयोग मिल्नेछ । मिष्ठान्न भोजन हुनेछ । अध्ययनमा बाधा आउँला । शत्रुहरुसँग टाढै रहनु उत्तम देखिन्छ ।
खर्च बढ्नेछ । अध्ययनमा बाधा । धन आर्जन गर्न कडा मेहनत । प्रेममा सफलता मिल्नेछ । आकस्मिक धन प्राप्तिको योग छ । मुद्दा मामिला तपाईको पक्षमा हुनेछन् । स्वास्थ्यमा समस्या देखिनेछ ।
अध्ययनमा रुची बढ्ला । बौद्धिकताको प्रसंशा हुनेछ । आकस्मिक लाभको सम्भावना । अनावश्यक झमेलामा फसिने सम्भावना छ । मानसिक तनाव बढ्ने छ । पारिवारिक कलहको सम्भावना, पति–पत्नीबीच विवाद होला ।
प्रेममा सफलता मिल्नेछ । नयाँ कामको अवसर मिल्नेछ । व्यापारमा हानी हुने योग छ । राजनीतिमा शुभ देखिन्छ । सामाजिक कार्यबाट लाभ मिल्नेछ । आकस्मिक धनमालको लाभ हुने योग छ । आत्मविश्वास बढ्नेछ ।
मान सम्मान मिल्नेछ । व्यवसायमा लाभ । अध्ययनमा सफलता मिल्नेछ । व्यावसायिक सफलता । आफन्तबाट जोगिनुहोला । धार्मिक कार्यमा मन लाग्नेछ । लामो दूरीको यात्रा नगर्नुहोला ।
सहयाेगी प्रशस्त हुनेछन् । घरमा कलह बढ्ला । निर्णय लिन द्विविधा होला । प्रेममा बाधा आउने छ । अध्ययनमा सुधार, आर्थिक लाभको सम्भावना । मानसिक चिन्ताले सताउला । काममा अवरोध ।
नयाँ व्यापार व्यवसाय गर्दा उत्तम देखिन्छ । नोकरीमा प्रशंसा हुनेछ । पारिवारिक सुख प्राप्ति । मन प्रफूल्लित रहनेछ । शत्रु सक्रिय हुनेछन्, आफन्तबाटै पनि जोगिनुपर्ने देखिन्छ । अध्ययनमा रुची बढ्ला ।
सफलता मिल्नेछ । मिष्ठान्न भोजन । आर्थिक क्षेत्रमा विवाद बढ्ला । चोटपटक लाग्न सक्छ । वादविवाद हुने सम्भवान छ । आलोचना गर्नेहरु प्रशस्त हुनेछन् । मनमा अशान्ति छाउनस सक्छ । यात्रा सुखद ।
आफन्तबाट धोका हुन सक्ला । जागिरमा पदोन्नतति होला ।विलासिताका सामान प्राप्त हुने योग छ । सन्तानबाट चिन्ता थपिनेछ । व्यापारमा फाइदा हुने देखिन्छ । प्रेम सफल हुनेछ । आफन्तहरुसँगको भेटघाटले मन प्रफूल्लित होला ।
काममा प्रशंसा हुनेछ । अध्ययनमा सफलता मिल्नेछ । आकस्मिक धन लाभको सम्भावना । पारिवारिक कलहको सम्भावना छ । स्वास्थयमा समस्या देखिन सक्छ । वैदेशिक यात्राको योग छ ।
मिति २०७७ साल फागुन २३ गते आइतबार, हेर्नुहाेस तपाईहरूको राशी अनुसारकाे भाग्यफल यस प्रकार रहेको छ। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस् । माता पाथिभराको कृपाले हामी सबैकाे दिन सुखद रहाेस् मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागी समय राम्रो रहेको छ । अभिभावकवर्ग वा विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग प्राप्त हुनाले समयमा नै काम सम्पन्न हुनेछन् । जागिरमा बढुवा, […]
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल असोज २ गते शुक्रबार इश्वी सन २०२० सेप्टेम्बर १८ तारीख अधिक आश्विन शुक्लपक्ष प्रतिपदा तिथी उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र शुभ योग बालव करण चन्द्रंमा कन्या राशिमा आनन्दादि योगमा शुभ योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन शरद ऋतु चन्द्रोदय ,अधिकमास अपुपदान प्रारम्भ मत्स्यनारायणमेला सुरु (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, […]
नवरात्रमा विशेष मेला लाग्ने नेपालका शक्तिपीठहरु कहाँ–कहाँ छन् ?
नेपालमा रहेका हिन्दू धार्मिक स्थलहरुलाई ‘श्री यन्त्र’को आकारमा स्थापना गरिएको छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । श्री यन्त्रको बीचमा पशुपतिनाथलाई राखेर त्यसको आसपासमा हुने गरी विभिन्न धार्मिक स्थलहरु स्थापना गरिएको पाईन्छ । लिच्छविकालतिर पनि यही यन्त्रको आधारमा धार्मिक स्थलहरु स्थापनाको योजना तयार गरिन्थ्यो भन्ने भनाईहरु प्रचलनमा रहेको छ । लोकोक्तिको अनुसार श्री यन्त्र धनकी देवी मानिने […]